२२ असार, काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले नेपालमा कोरोना संक्रमित बिरामीमा प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचारबारे अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।
निको भएर गएका बिरामीबाट उत्पादन भएको एन्टिबडी कोरोना संक्रमणपछि जटिल अवस्थामा परेका बिरामीमा राखेर उपचार गर्न सकिने विधिबारे अनुसन्धान भइरहेको परिषद्ले जनाएको छ ।
परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार यस अनुसन्धानका लागि परिषद्को इथिकल रिभ्यु बोर्डले स्वीकृति दिइसकेको छ । अब यो अनुसन्धान छिट्टै सुरु हुने ज्ञवालीले बताए ।
परिषद्ले कोरोना संक्रमितको जिन सिक्वेन्सिङको अनुसन्धान पनि अघि बढाएको छ । कोरोना संक्रमित बिरामीको स्वास्थ्य स्थिति, उनीहरू कति दिनमा भर्ना र डिस्चार्ज भएका छन्, कस्तो लक्षण देखिएको छ जस्ता विषयमा अनुसन्धान भइरहेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
यसको लागि एन्टिबडी विकास भएका मानिसको रगतबाट प्लाज्मा निकालिन्छ र त्यसलाई बिरामीको शरीरमा पठाइन्छ । यो विधिबाट बेलायत, भारतलगायतका मुलुकहरुमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का बिरमीको उपचारको प्रयास गरिएको थियो । उक्त उपचारको प्रयासमा केही सकारात्मक नतिजा आएको भए पनि यसले उत्साहजनक नतिजा भने दिन सकेको छैन ।
यो विधिले बिरामीलाई छिटो निको पार्न सहयोगी भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने विशेषज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । सन् १८९० मा पहिलोपटक यो विधिको प्रयोग गरिएको थियो । सन् २०१४ मा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले इबोलाको उपचारको लागि पनि यो विधिको सिफरिस गरेको थियो ।
कोरोना भाइरस प्लाज्मा थेरापी
कोरोनाविरुद्ध नेपाली औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गरिँदै
काठमाडौं : कोरोना भाइरसको उपचारमा सहयोग पुग्‍ने गरी नेपालमै उत्पादित औषधिको क्लिनिकल ट्रायल हुने भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान अनुसन्धान परिषद्ले नेपालमै उत्पादित फ्याबिपिराभेल नामक औषधिलाई कोभिड १९ को लागि क्लिनिकल ट्रायल गर्न लागिएको बताएको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले कोभिडसँग मिल्दो...
पर्सामा कोरोना संक्रमितको प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार सुरु
पर्सामा कोरोना संक्रमितको प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार सुरु भएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्
बुटवल कोरोना विशेष अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापी सेवा सुरु
अर्घाखाँची : रुपन्देहीस्थित बुटवल कोरोना विशेष अस्पतालमा सोमबारदेखि प्लाज्मा थेरापी विधिबाट कोरोना संक्रमितको उपचार सुरु भएको छ। कोरोना अस्पतालमा उपचारत संक्रमित बिरामीलाई प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार सेवा सुरु गरिएको अस्पालतका कोरोना फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापाले जानकारी दिए। यस विधिले रोगप्रतिरोधी क्षमता एन्टिब...
प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना संक्रमितको उपचार सुरु
राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले प्लाज्मा थेरापी विधिबाट कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि १२ वटा अस्पतालहरुमा अनुसन्धान शुरु गरिएको जनाएको छ । परिद्षका सदस्य सचिव डा. प्रदिप ज्ञवालीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित लाइभ अपडेट मार्फत ३ वटा निजी र ९ वटा सरकारी अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापी विधिबाट कोरोना संक्रमितको उपचारको तयारी गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक प्लाज्मा थेरापी विधिबाट कोरोना संक्रमितको उपचार सफल भएसँगै कोरोना निको भएका २५ जना व्यक्ति प्लाज्मा दिएर जीवनदान गर्न तयार देखिएका छन् । कोरोना संक्रमणले गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामी र प्लाज्मा दिने व्यक्तिको इच्छाअनुसार प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार प्रक्रिया सुरु भएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले जनाएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कन्भालेसेन्ट …
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले १५ वटा अस्पतालमा ‘कन्भेलेशन प्लाज्मा थेरापी’बाट उपचार प्रक्रिया सामानान्तर रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । विश्वभरि नै कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित भई स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएर आईसीयू र भेन्टिलेटरको आवश्यकता हुने बिरामीमा ‘कन्भेलेशन प्लाज्मा थेरापी’को उपचार पद्धति उपयोगि सिद्ध भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वीकृतिमा तीन वटा निजी तथा १२ वटा सरकारी गरी १५ वटा अस्पतालमा सामानान्तर रुपमा प्लाज्मा थेरापीको अध्ययनमा संलग्न गराई उपचार गर्न अनुमति दिइएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार उपचारका लागि अनुमति दिइएको १५ अस्पतालमध्ये आठ वटा काठमाडौं उपत्यकाका छन् ।
१९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) ले कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न १२ वटा अस्पताल तोकेको छ । नेपालमै पहिलो पटक प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार सफल भएलगतै एनएचआरसीले देशभर यसलाई विस्तार गर्न …
४० प्रतिशत अस्पतालमा छैन पिपिई सेट
काठमाडौं : कोभिड-१९ का बिरामीको उपचारका लागि तोकेका ३० प्रतिशत अस्पतालमा नै एम्बुलेन्स सेवा नभएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले हालै गरेको एक अनुसन्धानले कोभिडका बिरामीको उपचारमा तोकिएका ३० प्रतिशत अस्पतालमा एम्बुलेन्स सेवा नभएको पाइएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले शं...